Afaka 5 segondra dia esorin'ity rindrambaiko web ity ny faran'ny sary | Famoronana an-tserasera
Misaotra an'ireo rindrambaiko an-tranonkala izay ananantsika amin'ny tambajotran-tambajotra, afaka manatanteraka asa sasany izay mitahiry ezaka be izahay ary amin'io fotoana io dia afaka mandany fotoana amin'ny fanatanterahana azy ireo. Delete.bg dia ilay tranonkala izay mamela antsika hanala ny ao ambadika misy sary ao anatin'ny segondra.
Ary na dia manana fampianarana mahafinaritra aza izahay hamafana vola toa izao, Ity fampiharana ity, na dia misy ny fepetra takiny aza dia hahatratra azy ao anatin'ny 5 segondra noho ny faharanitan-tsaina artifisialy izay ampiasainy hanaovana izany majika rehetra izany. Manana ny sasany amin'ireo kileman-toetrany isika izao, satria tsy ny volamena rehetra no manjelanjelatra.
Omaly nizara fampiharana tranonkala mahafinaritra iray hafa izahay ho an'ny endritsoratra. Efa izao Esory.bg ilay maka ny laza rehetra esorina ny sary avy amin'ny sary izay isehoan'ny olona foana.
Mampakatra ny sary izahay ary i Remov.bg dia hikarakara ny fanesorana ny aoriana. ny valiny dia rakitra PNG miaraka amin'ny mangarahara mba hahafahantsika mametraka ny vola tadiavintsika. Izy rehetra ao anatin'ny segondra vitsy ary misaotra an'io tranonkala io fa afaka maimaimpoana tanteraka izahay avy amin'ity rohy ity.
Toa an'i FontSpark, ny interface dia tena intuitive, na dia tsy tsara tarehy toy ny voalohany aza. Tsy vitan'ny hoe afaka mampiasa sary avy amin'ny fitadidiantsika isika, fa mamela ny fampidirana URL ka tompon'andraikitra amin'ny fanesorana ny faran'ny sary
Ilay tokana izay voafetra ho an'ny olona ihany, Ka raha mampiasa biby ianao, ilay nampiasainay tao amin'ilay tutorial Creativos Online, na zavatra iray, dia holaviny fotsiny ilay rakitra. Mazava ho azy, mila mijery akaiky ny valiny nomena ianao, satria tsy lavorary 100% tanteraka izany.
Una fampiharana web hanaisotra ny mombamomba ny sary afaka segondra ary izy io dia mety indrindra amin'ireo asa izay tsy maintsy hanesorantsika haingana io vola io. Fahombiazana lehibe amin'ny fampiharana tranonkala.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Ahoana ny fomba fanesorana ny sary avy amin'ny sary 5 segondra ary tsy misy ezaka
Tsy matotra izany. Mila mianatra mampiasa Photoshop ianao, fitaovana matihanina tsara indrindra.
Canvas dia fampiharana Google vaovao momba ny sary haingana sy ny fanoratana